साझासवाल: नेताहरु बजेटलाई किन राजनीतिसँग सौदावाजी ? « News from Nepal as it happens | Nayakhabar.com
साझासवाल: नेताहरु बजेटलाई किन राजनीतिसँग सौदावाजी ?
धेरै नेपालीहरु बुझे पनि नबुझे पनि बजेट भनेपछि कान ठाडो पार्छन् । सरकारी कर्मचारीका लागि तलब बढ्ने आश, उद्योगी/ब्यापारीका लागि करको दर घटबढमा रुचि हुनु स्वभाविकै हो । तर साधारण गाउँमा बस्ने नागरिक कसरी जोडिन्छन त राष्ट्रिय बजेटसँग? लोकतन्त्र आएपछि एउटै बजेट सजिलैसँग आउन पाएको छैन । त्यो नियति यस बर्ष पनि दोहोरियो । बेलामा पुरा बजेट नआउँदा त्यसको असर कस्तो हुन्छ? नेताहरु बजेटलाई पनि किन राजनीतिसँग सौदावाजी गर्छन? बजेट आउँदा के हुन्छ? नआउँदा के हुन्छ?
साझा सवालमा छलफल गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ- राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र एमालेका दुई अर्थमन्त्रि भरतमोहन अधिकारी र सुरेन्द्र पाण्डेको बजेट निर्माणका सल्लाहकार केशव आचार्य र व्यापारीहरुको संस्था नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेत ।
2 Responses to “साझासवाल: नेताहरु बजेटलाई किन राजनीतिसँग सौदावाजी ?”
jay matrebhumi says:	July 15, 2012 at 6:26 pm	गणतन्त्रे चोर देशद्रोही भ्रस्टचारी हरु लाइ क्यामरा ल्याएर बेंगे हानेर कुरा गरेर केही हुने वाला छैन ! किन कि इनिहरु लाइ थाहा छ यो देश का जनता भनौदा हरु आफ्नो अलिकति स्वार्थ पुरा गर्न को लागी गणतन्त्रे देशद्रोही दलाल हरु को लागी पूर्ण रुप ले पालुवा कुकुर भैसकेका छन भनेर ! वा यो देश का जनता भनौदा हरु को अगाडी देश र जनता भन्ने नारा लगाएर सजिलो संगै चुतिया बनाऊन सकिन्छ भनेर तर यो सत्ते नै हो यही नै भै रहेको छ ! गणतन्त्रे देशद्रोही गदार भ्रस्टचारी नेता हरु ले देश र जनता भन्दै देश लाइ खोक्लो हुने गरी लुटी रहेका छन र जनता भनि भनि जनता लाइ पनि सोसन गरिरहेका छन ! मैले देखे को यो सबै समस्या को एऊटै मात्र हल छ ! जब सम्म यो स्वोतन्त्र देश का स्वोतन्त्र जनता भनौदा हरु जनता बनेर २,४, जना गणतन्त्रे देशद्रोही नेता हरु लाइ काट्दैनन र २,४ जना हाकिम बनेर जनता लाइ सोसन गर्ने र आफ्नो पद को दुरपयोग गर्ने हरु लाइ काट्दैनन तब सम्म यस्तै नै भैरहन्छ !
मन परे हरियो, नपरे रातो 8 83
Reply	ram oli says:	July 16, 2012 at 7:51 pm	बजेट लाइ राज नीति संग किना सौदा बाज्जी भन्दा एमाले र कांग्रेस लाइ डर लाग्छ किनाकी अलि कति भएय पनि थोरै खोपी भएको नेता बाबु रामे हो र पूर्ण बजेट लिएर बिकासको केही गति अगाडी तिर बडायो भने निर्बाचन नजिकै छ भोलि गाहारो भैहाल्छ भन्ने कुरा ले पिरोले को कारणले नै पूर्ण बजेट लाइ रोकेको होला तर हामि ले मान्छी चिन्ना सक्छौ कांग्रेस त् गया गुर्जय को भैहाल्यो एमाले पार्टी राम्रो भया पनि पार्टी भित्र कुहेका गद्दार धेरै छन त्यसै ले /////गर्नु बाद्दय्ता छ